Hetsika italiana telo no mampiroborobo ny fizahan-tany miaraka amina fampiroboroboana fahatokisan-tena vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Italia » Hetsika italiana telo no mampiroborobo ny fizahan-tany miaraka amina fampiroboroboana fahatokisan-tena vaovao
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao farany Italia • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
TTG, SIA ary SUN 2021 dia tonga soa aman-tsara
Rehefa vita ny TTG, SIA, ary ny SUN 2021, dia manantena ny minisitry ny fizahan-tany any Italia, Massimo Garavaglia, fa ny tanjona fitomboan'ny fizahan-tany 20% amin'ny harin-karena faobe dia tanjona tratrarina.
TTG, SIA sy SUN 2021 dia nifarana teo amin'ny Rimini Expo Center (Italia) niaraka tamin'ny mpitsidika nanoratra 90% ny isa voarakitra amin'ny andiany 2019. Nokarakarain'ny Vondrona Fampirantiana Italiana, ireo hetsika telo, izay mampivondrona ny rojo famatsiana fizahan-tany, dia nahitana fisondrotana mazava teo amin'ny fiodinan'ny fitokisan'ny mpandraharaha: lohahevitra fototra nanokafana ny andiany tamin'ity taona ity. Manomboka eto indray ny fizahan-tany italiana sy iraisam-pirenena.
Ny tsenan'ny fizahantany italianina nokarakarain'ny Italian Exhibition Group dia nanohina ny haavon'ny fanatrehan'ny olona mialoha ny areti-mandringana.
Marika 1,800, fanamafisana ary fidirana vaovao avy amin'ny firenena vahiny sy faritra italiana maro no nanatrika.
Hetsika mihoatra ny 200 amin'ny kianja filalaovana 9 ho an'ny dinika sy fampahalalana mandritra ny 650 ora dia natao manokana ho an'ireo matihanina amin'ny indostria.
Fanombohana indray izay nahitana mpividy 700 avy any amin'ny firenena vahiny 40 mahery (ny ankamaroan'izy ireo dia nanatrika ara-batana miaraka amin'ny fampifanarahana virtoaly ho an'ireo avy any amin'ny firenena mila sidina lavitra), 62% avy any Eoropa ary 38% avy amin'ny firenena tsy Eoropeana. Ny 80% amin'ireo mpandraharaha nofantenana amin'ny fampitoviana manokana amin'ny fizahan-tany fialamboly (avy amin'ny fitsangatsanganana vondrona mankany amin'ny tolo-kevitra namboarina) miaraka amin'ny anjara bebe kokoa amin'ny sehatry ny MICE (Fihaonana, Famporisihana, fihaonambe ary fampirantiana). Niparitaka tamin'ny efitrano 19, marika 1,800 no nanatrika ary hetsika 200 mahery no natao niaraka tamin'ny mpandahateny maherin'ny 250 tao amin'ny "Arena" sivy nandritra ny adiny 650 momba ny fifanakalozan-kevitra sy fampahalalana.
Valiny izay nihoatra ny nandrasana ary nanakaiky ny ambaratonga mialoha ny areti-mifindra, nahazo fankasitrahana marobe avy amin'ireo mpandray anjara rehetra nanatrika ary nandray anjara tamin'ny famolavolana hafatra feno fahasahiana sy famoronana ho an'ny sehatra voakasik'izany maneran-tany noho ny hatairana tampoka. Ireo firenena vahiny telopolo nanatrika ny TTG, izay nanokatra lalantsara ara-pahasalamana ny sasany tamin'izy ireo, dia nanome ny mariky ny fahatokisana izay nandrasan'ny tsenan'ny fizahan-tany voalamina. Ny tropika, ny Afovoany Atsinanana, ny Amerika ary ny morontsirak'i Mediterane, ary koa i Eoropa, dia nanome aina vaovao mba hifanaraka amin'ireo fonosana fizahan-tany iraisam-pirenena vaovao.
Miaraka amin'ireo fikambanana mpivarotra be solontena indrindra, manomboka amin'ny Federalberghi ka hatrany amin'ireo sehatra soloin'ny Confturismo, ASTOI (Tour Operator Association), FTO (Federasiona Fizahan-tany momba ny fizahan-tany), ao anatin'izany ny FAITA Federcamping, SIB (Union Seaside Establishment Union), ny mpiara-miombon'antoka ENIT (Italia Board Board) , ny Faritra, tontolon'ny fikarohana miaraka amin'ny ISNART, Polyteknika any Milan ary CNR (National Research Council) ary mpandinika fironana momba ny tsena sy ny mpanjifa, no namboarina ny tetiandrom-pivoriana iray hisolo tena ny fizahan-tany amin'ny ho avy.
Karazana fizahan-tany izay hifampidinika amin’ireo andrim-panjakana mba hampitaovana haingana ireo fitaovana ilaina amin’ny fanombohana vaovao: avy amin’ny tolo-kevitra aroso amin’ny fanatsarana ny sehatry ny fandraisam-bahiny eo amin’ny fotodrafitrasa sy ny foto-kevitra mba hahafeno ny fitakiana kalitao tsy mitsaha-mitombo, amin'ny paikady indostrialy vaovao, toy ny amin'ny ITA (Italia Air Transport), izay nanamafy ny fahavononany hanana faharetana amin'ny tontolo iainana sy ara-toekarena amin'ny alàlan'ny fiasa miaraka amin'ny fiaramanidina farany ary hamaly ny fangatahana sidina mivantana amin'ny làlan'ny kontinanta.
Noporofoin'ny TTG ihany koa fa ny faritany dia mety ho manam-pahaizana manokana kokoa amin'ny fihainoana ny fiantsoany sy ny fanatsarana ny fananany nentim-paharazana tsy azo tsapain-tanana sy ny vokatra miavaka, manomboka amin'ny fizahan-tany fanandramana mankany amin'ny lalan'ny divay. Ny fironana amin'ny tsena dia mila fantarina mialoha miaraka amin'ny fahitana lavitra mba hamelomana indray ny fahaizan'ny mpizahatany italiana amin'ny tsena manerantany. Ny zava-nisongadinan'ny TTG faha-58 dia niresaka ny fitokisan'ny olona, ​​ny fiainana, ny natiora ary ny ho avy. Nandritra ny lanonana fanokafana, ny minisitry ny fizahantany Massimo Garavaglia dia naneho ny fanantenana fa hitombo 20% amin'ny harinkarena faobe ny sandan'ny fizahantany noho ny vokatry ny marika Italiana sy ny fepetra noraisin'ny Governemanta ho tombontsoan'ny orinasa sy ny asa.
Ho fanamarihana ny faha-70 taonan'ny SIA Hospitality Design, fampirantiana efatra - efitrano, ivelan'ny trano, fahasalamana ary hotely ao amin'ny Motion - natolotry ny arsitek izay manam-pahaizana manokana momba ny fandraisam-bahiny sy ny famolavolana fifanarahana, naneho ny fanavaozana sy ny fivoarana tao amin'ny hotely Made in Italia tao anatin'ny rendrarendra, faharetana ary fifantohana fatratra. ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina ananan'ny vahiny, miaraka amin'ny fampitomboana ny saina amin'ny fifandanjana eo amin'ny toerana mihidy sy misokatra.
SUN Beach & Outdoor Style, tamin'ny andiany faha-39, dia nanasongadina ihany koa programa iray feno hevitra vaovao ho an'ny orinasa ivelany, toeram-pandroana ary toeram-pilasiana. Ny foto-kevitra vaovao momba ny glamping dia nampifangaro ny fangatahana famolavolana, ny fiheverana ny antsipiriany ary ny fanahy malalaka ho an'ny tsena mety ho an'i Italia sy any ivelany, anisan'izany ireo firenena mangatsiaka any avaratr'i Eropa. Ary ny SUN koa dia nanolotra ny fitaovana ho an'ny orinasa hananany anjara manokana amin'ity fizarana ity, miaraka amin'ny adihevitra kendrena amin'ny programa Arena ivelan'ny kianja ary mifantoka manokana amin'ny lohahevitra maro ao amin'ny Beach Arena momba ireo teknolojia nomerika vaovao izay ilain'ny tora-pasika ankehitriny ny manome serivisy vaovao ho an'ny mpanjifa amin'ny anarana fitsaharana sy fiarovana.
Ankoatr'izay, tamin'ity taona ity ny efitrano SIA dia nanasongadina ny hetsika Superfaces vaovao, tsena b2b manokana ho an'ny fitaovana vaovao ho an'ny atitany, ny famolavolana ary ny maritrano.
Manantena ny fihaonana amin'ny indostrian'ny fizahantany italianina sy iraisampirenena indray ny IEG ao amin'ny Rimini Expo Center amin'ny 12-14 Oktobra 2022.